Bazinikele emapholiseni abakoBushiri | uMthunywa
Bazinikele emapholiseni abakoBushiri
19 Nov, 2020 - 00:11 2020-11-18T20:56:53+00:00 2020-11-19T00:06:30+00:00 0 Views
uBushiri lomkakhe uMary
IMIBIKO evela eMalawi ngoLwesithathu ekuseni iveza ukuthi uMfundisi Sheperd Bushiri lowakwakhe uMary sebezinikele emapholiseni kulandela ukukhitshwa kwencwadi ethi kababotshwe kuleliya lizwe.
Izolo uhulumende weMalawi laye ukhiphe incwadi egunyaza ukubotshwa kwalaba kulandela ukweqa kwabo eNingizimu Afrika bebalekela icala lokukhwabanisa izigidi zamaRandi.
OBushiri batshaye bachitha kwele South Africa ngeledlule kusaphele izinsukwana bethole ibheyili kaR200 000 ecaleni lokukhwabanisa imali ebalelwa ngaphezulu kwe R106 million.
Ibheyili yakhe isihoxisiwe kuleli kanti oKlebe bathe kwatshaya uLwesine engazinikelanga emapholiseni eSouth Africa kukanti umuzi wakhe obiza uR5.5 million oseCenturion, eGoli usabanjwa nguhulumende.
UNgqongqoshe wezaseKhaya kwele South Africa uMnuz Aaron Motsoaledi izolo udalule ukuthi uMfundisi Shepherd Bushiri lomkakhe uMary bebelama-passport amahlanu aseMalawi umuntu ngamunye ngesikhathi echazela iPhalamende lakuleli ngokweqa kwabo.
UMotsoaledi uveze lokhu ngesikhathi echazela iPhalamedne ngoLwesibili ukuthi beqe kanjani kuleli laba batshadikazi ababhekene lecala lokukhwabanisa imali engaphezulu kweR106 million.— Isolezwe